7 Chakras: Zintoni i-Chakras- - Iintsingiselo Iintsingiselo
Isichazi Magama Sephupha
I-Horoscope Yenyanga Yasimahla Yasimahla
7 Chakras: Zintoni Chakras
Kwi Isithethe samaHindu ukuya I-Chakra liziko lamandla ibekwe emzimbeni ofihlakeleyo (ngokuchasene nokuba nobukho ngokwasemzimbeni).
Le mijelo yamandla ithwala amandla obomi (abizwa ngokuba yiPrana) kuwo wonke umzimba.
Ziyachaphazela nendlela umntu anayo Siza Kubane ibonakalisa.
Skrolela ezantsi kwaye ucofe i-chakra ofuna ukufunda ngayo. Skrolela ezantsi okanye ucofe ukufumana okungakumbi malunga noko 7 chakras zikhona kwaye 'zisebenza' njani.
yeyiphi iplanethi eyijupiter evela elangeni
Ingcambu yeChakra Symbolism kunye neentsingiselo
I-Sacral Chakra Symbolism kunye neentsingiselo
Isolar Plexus Chakra Symbolism kunye neentsingiselo
Intsingiselo yentliziyo Chakra Symbolism kunye neentsingiselo
Umqala weChakra Symbolism kunye neentsingiselo
Crown Chakra Symbolism kunye neentsingiselo
Iintsingiselo ezi-7 ze-Chakras kwihlabathi liphela
Igama elithi Chakra livela kwi- Ixesha lesiSanskrit elithetha i-vortex . Abanye abaphengululi basixelela ukuba igama lithetha ivili. Kungenxa yokuba iChakras ijikeleza ngokwewotshi.
Ngelixa kukho amaziko ombane amancinci emizimbeni yethu, akho I-7 enkulu yeChakras uninzi lwazo kugxilwe kuzo.
Funda konke malunga Iisimboli ze-Chakras kunye neMibala ...
Abasebenzi bokukhanya basixelela ukuba bamalunga ne-4 'ngaphezulu komzimba ongowasemzimbeni apho baphembelela inethiwekhi yonke ye-neural. Esi sizathu sokuba i-acupuncture isebenzisa iindawo zeChakra njengesiqalo segridi yomzimba.
Abanye abantu bathetha ngezinye ezimbini ezibalulekileyo zeChakras enye yazo ingaphezulu nje kweentloko zethu njengonxibelelwano oluvela kwi-Divine kwaye enye yayo iqhubela phambili ekubanjweni okungunaphakade kubanjwe kwi-8 ngentambo yamandla
Phantse wonke utitshala kunye nesikolo ngasinye esixoxa ngeChakras sinendlela yaso kunye nefilosofi ngokubhekisele kula maziko amandla. Ke, kubalulekile ukucinga malunga nokuba i-Chakra ithetha ntoni kuwe ngaphambi kokufuna isikhokelo.
Ngokwesiko lamaBuddha Inkqubo yeChakra isisiseko kumanqanaba omphefumlo. Ngokusebenza ngenkqubo ye-Chakra umntu uzama ukufikelela kwisithuba sokungabinanto iyonke ebalulekileyo kubuBuddha.
Kwisithethe seNew Age Oku kuguqule ngeendlela ezahlukeneyo zokucamngca ezijolise ekunikeni amandla i-Chakra ethile okanye zonke ii-Chakras ngeyona njongo iphambili yokukhanyisela.
Kwiingcamango zeHimalaya I-Chakras ifuthe kuyo yonke imiba yobukho bomntu. Inkolelo kukuba nokuba imeko ye-Chakra ihlala ikhona na kwamanye amaziko amandla-iqhina eliyeka kuphela xa ubomi buphela.
Apha iingcali zifanisa i-Chakra nekhabhathi yeefayili yeentlobo. Ngelixa nganye imele into ethile kuhlolo lwangaphandle, ufumana ngakumbi xa uvula idrowa! Ngale ndlela i-Chakras zinemilinganiselo emininzi kwaye zinikezela ngomnyango ukuya kufikelela kumda wokuqonda okungokomoya kubandakanya iirekhodi zeAkashic zobuqu.
Inkcubeko yaseNtshona khange ibekho ngaphandle kwengqiqo yamaziko amandla okomoya. Nangona kunjalo eyona mbono yeChakras ayizange yaziswa kude kube sekupheleni kweminyaka yoo-1920 kwincwadi enzima kakhulu ebizwa ngokuba yi-Serpent Power ngu-Sir John Woodroffe. Le tome yazisa ii-Chakras ezisi-7 eziphambili ezingumgogodla weengcinga zasentshona kwesi sihloko.
Ukusuka kwi- Umbono weNew Age I-Chakras ayigcini nje ngokugcina idatha yokomoya kodwa ikwasebenza njengamaziko okukhumbula, ukurekhoda wonke umzuzu wobomi bakho. Kuyafana nenkumbulo yeselula, akukho nto ilahlekileyo-ngamanye amaxesha kunzima ukufikelela kuyo.
I-Chakras ichazwa njengemibala ethile yokudibanisa. Kungenxa yeentshukumo ezahlukeneyo abasebenza kuzo. Ukuba uqala ukucinga ngemibala yomntu Siza Kubane kwaye Umbala weSimboli , ukwindlela elungileyo!
Zonke ezi zinto zibopha kunye, zenza ipateni yokomoya eyahlukileyo kumntu ngamnye.
Funda inkcazo yethu ebanzi Imibala yeChakra kunye neeMpawu zeChakra !
Ukucocwa kweChakra, ukuLungelelanisa kunye nokuphilisa
Njengakwi-auras, ukuba i-Chakra inodaka okanye buthuntu obonisa iingxaki ezinokungena nzulu njengokucothisa okanye ukuvimba inkqubo yokujikeleza.
Ngokwasemzimbeni nganye i-Chakra ilawula amalungu abalulekileyo kunye namadlala. Babeka emgceni ecaleni komqolo womqolo. Oku kunefuthe kwiimvakalelo zethu nakwindlela esilibona ngayo ilizwe.
Xa enye okanye ngaphezulu kweChakra iphuma ibhalansi kwaye ihlala injalo inokuchaphazela ezinye iiChakras ezingabamelwane. Nokuba ziphantsi kokusebenza, ukuvimbile, ukuvaleka okanye ngaphezulu kokusebenza iziphumo azibonisi emzimbeni wethu kuphela kodwa nasezingqondweni nasemoyeni.
Ezona zikhombisi zixhaphakileyo kwiingxaki zeChakra zibandakanya ukuncipha okuphawuleziweyo kwamandla, uxinzelelo, ukungoneliseki kunye nengcinga ekhathazayo yokuba into ethile icinyiwe. Kwelinye icala xa inkqubo yethu yeChakra isebenza ngokubambisana amandla akho ayaphucuka njengoko ukwenzayo.
Njengazo zonke izinto eziphilayo izilwanyana zinenkqubo ye-Chakra umahluko ophambili kukukhula kwinqanaba lokungcangcazela.
Ubume beChakras buyahluka kancinci ngokuxhomekeka kubume besidalwa, kodwa ngokubanzi zilandela ikholamu yomqolo njengamaziko amandla abantu.
Izilwanyana zikwanazo ne-Chakras ezikhethekileyo kwi-physiology yazo.
Umzekelo, i-Bud Chakras ikhona kwizilwanyana ezinamaqhina okanye amanqina (ngokufana ne-Chakras yomntu omncinci ezinyaweni zethu-uyazibuza ukuba zitshotshozela na?). Lo ngummandla ova ingozi kwaye unikezela eso sidalwa ngengqondo yokomisa umhlaba (abo banenja ezixhalabileyo baya kuba benza kakuhle ukugxila ekusebenzeni kwamandla kwi-paws zabo).
Indoda ye-scorpio kunye nebhinqa le-capricorn ngokwesondo
Ukusebenza nezilwanyana kwi-Chakra Healing iyonke okanye ukuLungelelanisa isilwanyana sakho, kuyanceda ukuzilungiselela ngaphambi kwexesha. Thambisa ngobunono iindlebe zabo kwaye uthethe cwaka, iithoni ezithobayo. Oku kunceda ukuhambisa i-aura yakho kunye neyabo ngendlela yokubambisana.
Qalisa kwi-Base Chakra kwaye usebenze ngendlela yakho yokuhlawula ingqalelo ekhethekileyo kumaziko azive epholile. Imiba yomzimba enxulunyaniswa neCnimal Chakras iyafana naleyo yabantu, ke ngoko unokusebenzisa ezo mbalelwano ngokudibeneyo nobuntununtunu bakho njengesikhokelo. Sithembe, isilwanyana sakho SIYA KUTHANDA ingqalelo.
Qaphela ukuba ezinye iimvakalelo ezisebenza rhoqo nezilwanyana zithi zine-Chakra yesibhozo ebizwa ngokuba yiBrachial Chakra. Lo mmandla usebenza njengeziko eliphambili lamanye amandla e-7. Ikwalawula kwakhona ubudlelwane phakathi kwabantu nezilwanyana.
Ime kwindawo yamagxa ezilwanyana. Xa i-Brachial Chakra ivaliwe okanye izilwanyana zivaliwe ukuba zilumke kakhulu ekuthinteni, zinenkathazo enxulumene nabanini bazo okanye zinokufumana ulusu.
Kulabo kuni abangawaziyo amandla e-Chakra ngokufanelekileyo ngezandla zenu ninazo ezinye iindlela. Izintonga zokuhlala okanye iipendulum zinokukunceda ufumane ingxaki.
Ngelixa asiqinisekisi oku njengokuthatha indawo yokhathalelo lwezilwanyana yindlela esemagqabini yokubopha ngokunzulu nangokomelele isilwanyana sasekhaya, ngakumbi ukuba yitotem yakho okanye uyayazi.
I-Knight of Swords Card Tarling Iintsingiselo
Iintsingiselo ezinkulu zeKhadi leArcana Tarot
Iintsingiselo ezilithoba zeNdebe yeTarot
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo: Ubuhlobo, isini kunye noThando
Inkcazo yeAura: Yintoni iAura
indoda ye-virgo kunye nolwalamano lwabasetyhini ne-scorpio
ilayibra indoda kunye nomfazi we-gemini bathanda ukuhambelana
Iiplanethi kunye neeplanethi ezincinci kwinkqubo yethu yelanga
© Onke Amalungelo Agciniwe